Qof jooga goobtaada shaqada ayaad taageero ka heli kartaa haddii ay liidato kartidaada shaqo iyadoo ay naafanimo sabab u tahay. Shaqabixiyahaaga ayaa markaas kaalmo helaya si uu shaqaale kuugu qoondeeyo.
Ulajeeddada laga leeyahay bidrag för personligt biträde waa in laguu fududeeyo in aad heshid shaqo oo aad heysatid. Kaalmadu waxay sidoo kale kuu fududeyn kartaa in aad ka qeyb qaadatid barnaamij ama jiheynta nolosha shaqada ee farsamada iskoolka la xiriirta. Xitaa haddii aad tihid qof shirkadle ah, aadna naafo tihid waxaad heli kartaa kaalmo loogu tala galay kaaliye qof ahaaneed.
Kaaliyahaaga shakhsiga ah taageero ahaan ayuu kugula shaqeynayaa xagga arrimaha la xiriira hawlaha shaqada ee soo noqnoqonaya ama xaalado shaqo oo aadan kaligaa ka bixi karin.
Waa annaga cidda kaalmada siineysa shaqabixiyaha. Kaalmadu ugu badnaan waa 60 000 oo koron sanadkiiba. Haddii aad shirkad leedihid, aadna tihid qof qaba naafanimo keeneysa dhibaatooyin waaweyn oo xagga xiriirka ah waxaad heli kartaa ilaa iyo 120 000 oo koron sanadkiiba.
Shaqabixiyahaaga ama adigaaga shirkadda leh waxaad heli kartaa kaalmo loogu tala galay kaaliye qof ahaaneed ilaa inta aad u baahantihid taageero si aad hawlahaaga shaqo uga soo baxdid.
Shaqabixiyahaagu wuxuu heli karaa kaalmo haddii ay hooseyso kartidaada shaqadu iyadoo ay naafanimo u sababtu tahay haddii:
Aad haysatid ama heli rabtid shaqo aad u baahantihid taageero qof ahaaneed si aad uga soo baxdid hawlahaaga shaqada.
Aad dhigatid dugsi sare, aadna u baahantahay taageero qof ahaaneed si aad uga qeyb qaadatid jiheyn nolol shaqo oo farsamo la xiriirta.
Aad u baahantahay taageero qof ahaaneed si aad uga qeyb qaadatid barnaamij ama baxnaanin ku jiheysan nolosha shaqada.
Sidii kaalmo-dhaqaaleedka lagu siiyo awgeed oona weli aadan isku qorin/iska diiwangelin Xafiiska Shaqada [Arbetsförmedlingen] waa inaad marka hore halkaan isku qortaa/iska diiwangelisaa.
Waa in shirkadda iwm ee aad u shaqayso nooga keenta caddayn qoran, taasoo lagu caddaynayo inaad u baahan tahay kaaliye-shaqsiyeedka [personligt biträde].
Waxaan sameyneynaa baaritaan, waxaanna go’aan ka gaareynaa inta kaalmadu ay la ekaaneyso.